Xildhibaanad Ubah Abdulahi Aden Oo ka hadashey dhibka ay leedahey arga gaxisada. Iyo sidey u wanaagsan tahey in laysla wada shaqeeyo | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xildhibaanad Ubah Abdulahi Aden Oo ka hadashey dhibka ay leedahey arga gaxisada. Iyo sidey u wanaagsan tahey in laysla wada shaqeeyo
Ma lagu baraarugsan yahey waxa ay tahey argagaxisada?!
Sida lala socda dhowrkii asbuuc ee u dambeeyay waxaa warbaahinta dalkan aad looga hadlayay wareysigii lala yeeshey Ubaydullah Hussain iyo waxyaaalihii uu ku yiri wareysigaa. Ninkan oo afhayeen u ah urur muslim ah ee dalkan ka jira ayaa wareysigiisii ku muujiyay in ay taageersan yihiin kooxdaan ISIS iyo ficilada ay ku dhaqmayaan.
Aad baa looga soo horjeestay taageeridaa. Dad badan ayaa arintaa ka hadley oo cambaareeyay taageeridaa uu ninkaa muujiyay iyo ficilka bini’aadanimada ka baxsan ee ISIS ku sameynayaan umadaha kale iyagoo magaca islamnimo adeegsanaya.
Mudaaharaad weyn oo arintaa looga soo horjeedo waa tii dhawaan la qabtey. Umado kala gedisan oo qaarkood ka socda masaajidyada ayaa arintaa ka hadley. Inkastoo dhibkaan argagaxisada ay dad qaarkii ku saleeyaan inuu quseeyo dhul ama jinsiyad gooni ah, hadana waa tan caruurtayada ay ku biirayaan oo ay ku dhimanayaan! Aad bey farxad u ahaan laheyd hadii dad ka socdaa masaajidada ama ururdada soomaliyeed ay ka dhex muuqnaan lahaayeen cambaareyntaa balaaran ee la muujiyay.
Hadaba Somali ma ku baraarugsan tahey waxa ay tahey argagaxisada iyo dhibka ay leedahey?
Somalida dalkan waxaa lagu tilmaaman iney yihiin bulshada uga tira badan markii jinsiyadaha kale loo fiiriyo. Waxaa kaloo lagu tilmaamaa iney yihiin umad ka dhex muuqata bulshada dhan walba. Umad aan u baahnaaneyn 10 sano iney ku qaadato sidey u soo dhex geli lahaayeen umadaha kale marka loo bar bandhigo jinsiyadahii kale eek a horeeyay.
Iyadoo taa jirta ayay hadana dhibaatooyin kale iska jiraan, sida dhibkan qarsoon ee argagaxisada ama radikalisering loo yaqaan. Ilaa dad lagu qiyaasasyo 50-60 dhalinyaro muslimiin ah ayaa ku biirey dagaalkaa oo ilaa 4-5 loo malenayaa ineey yihiin somali.
Sanadkii hore waa tii labo gabdhood oo walaalo ku biirey dagaalkii Syria;
Nin kaloo somali/norwegian waa tii lagu diley qarxii Nairobi; Ninkii lagu diley http://www.nrk.no/verden/nordmann-drept-i-somalia-1.7561047.
Hadaba su’aasha u baahan in leys weydiiyaa ayaa ah waa maxey sababta iyo baahida keeneysa in caruurtayada ay ku biiraan kooxahaa? Sideese looga hortegi karaa dhibkaa? Aadna ku ogaan kartaa markaa uga baqdo inuu ilmahaagu ku biirey dhankaa?
Dhibkan argagaxisada waa dhib aduunka ku cusub. Siyaabooyin kala gedisan loo maleenayaa iney sababtey. Balse xalinteed cid jawaab cad u heysaa ma jirto. Waxaase la og`yahey hadii meelo badan la is kala wada shaqeeyo sida iskuulaadka, walaadiinta iyo masaasjiyada, ay keeni karto in uu dhibkaa laga hortegi karo.
Masaajidada Oslo howl weyn oo culus ayay bulshada u hayaan. Duruusyo kala gedisan ayaa laga bixiyaa, muxaadarooyin ayaa lagu qabtaa, gudiyo kala gedisan ayaa howlo kala gedisan haya sida gudiga dhalin yarada ama gudiga ka shaqeeya barnevern-ka Ama Caruurta.
Masaajidada Somalida ee Oslo waxey sheegeen in ay arintaan argagaxisada ay aad uga hadlaan. Loogana hadlo salaadaha, shirarka iyo muctamarada ay qabtaan. Wacyi gelintaa balaaran waa mid loo baahan yahey. Balse waxaa wanaagsan in howsha weyn ee la qabto aysan ku koobnaan 4.darbi ee masaasjdka iyo bulshada loo hayo.
Aduunka waxaa maanta laysku kala reebey dhanka warbaahinta. Oo ninkii ka maqan dhankaa, fartaa ku mudan. Dhibkan radikaliseringan madaaba uu noqdey dhib diimeed oo islamnimo ah, hadana masaasjiyada somaliyeed lagu tilmaamayo iney yihiin kuwa xiran waa muhiib in ay isku dayaan oo ay u muujiyaan wax qabadkooda umadaha kale. Markaad ogsoon tahey waxa uu qabto masaajidku, wey fudud tahey inaad difaacdo oo laysla shaqeeyo.
Somaliyeey TOOS oo ku dadaal inaan caruurtaada, mustaqbalkii somaliya aan nalaga HABAABIN.
WD : Xildhibaanad Ubah Abdulahi Aden